Saddex sabab oo Shiinaha uu ku taageeri karo Taliban
Tuesday September 14, 2021 - 07:03:29 in Wararka by Hargeisa Head OFFICE
Dalka ugu dhow inuu xiriir dhinac walba ah la yeesho Taliban waa Shiinaha, balse maxay yihiin faa'iidooyinka uu ka heli karo?
1- Faa''iido dhaqaale
Afghanistan ayaa qarka u saaran inay u burburto dhaqaale ahaan
Meelaha uu guusha gaaray waxaa ka mid ah qaaradda Afrika oo uu dalal badan ku sameystay maalgelin dhaqaale, taasoo uu ka faa'iidayo dhankiisana.
Haddii Shiinaha uu gacan u fidiyo Afghanistan waxaa suuragal ah in Taliban uusan kala kulmin ceeb, wax su'aal ahna aysan ka keenin arrinta muslimiinta Uighur ee mar walba looga hadlo dalalka muslimiinta.
Sidoo kale Shiinaha ayaa ka faa'iideysanaya boos ay banneysay Hindiya oo la og yahay inay cadaawad kala dhaxeyso Beijing.
'laba halis' - Muslimiinta Uyghurs cabsida Taliban oo uga daran midda Shiinaha
Muxuu Sacuudigu uga aamusan yahay qabsashada Taliban ee Afghanistan?
Ilaalada Taliban iyo Pakistan way isula shaqeyn karaan si dhow balse saaxiibbo ma aha
Ma soo noqon kartaa xaaladdaasoo kale?
Marxaladdii hore iyo tan maanta waxa kaliya ee kala bixin kara waa doorka Shiinaha.
Haddii Shiinaha uu hubsado inuu heli doono faa'iidooyinka uu doonayo ee dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda, waxa uu xukunka Taliban ka badbaadin karaa inuu burburo.
Haddii ay Shiinaha go'aankaas qaadan waayaan, Taliban waxay ku keli noqon doonaan mustaqbalka waddankooda.